Nin isku dal-dalay bidaar naceyb. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Nin isku dal-dalay bidaar naceyb.
Muqdisho – Jaceyl uu uqabay muuqaalkiisa oo mar walba qurxoonaada darteed ayaa ku qasabtay inuu noloshiisa aduunyo soo geba-gabeeyo Injineer u dhashay dalka Hindiya.
In muddo ah waxa ka hoobanayay timaha, waxa uuna wallaac joogta ah ka qabay maalin uun inuu yeesho Bidaar, dabadeed waxa uu bilaabay baadi goobka mushkiladda heysatay, hase ahaatee daweyn joogta ah oo aan xal u noqon dhibaatadii heysatay kaddib waxa uu goostay inuu nolosha is dhaafiyo.
Dhacdadaan murugada xanbaarsan waxa laga diiwaan giliyay Magaalada Maderay City, Gobolka Tamil Nadu, ee Koofurta fog ee Hindiya.
Sida lagu daabacay barta “Janman” warar ka soo baxay Boliiska Gobolkaas ayaa xaqiijiyay in Armithon Raj oo ahaa Injineer dhanka Barnaami-yada uu dal-dalay naftiisa ka gadaal markii ay soo food saartay cabsi la xiriirta Bidaar.
Mr Raj ayaa da’ahaan jiray 27 sano, waxa uuna Barnaamijeeye u ahaa Shirkad Bangladesh ah oo ku tiil Bengaluru, Gobolka Karnataka.
Hooyadii ayaa dareenkeeda murugada leh la wadaagtay warbaahinta, waxa ayna sheegtay sida xanuunka leh oo ay u dareentay wiilka keliya oo ay ifka ku ogeed.
Waxa ay ka warbixisay sidoo kale Raj hooyadii sida inankeedu quruxda u jeclaa oo uu mar waliba ugu dadaali jiray muuqaalkiisa iyo qurxinta timahiisa.
“Walxaha lagu nafaqeeyo timaha ayuu soo iibsaday, waxa uu liqi jiray dawooyin badan oo ka hortagga tima daadashada, culeys dhanka shaqada ah ayuu dareemayay tan iyo markii uu isku arkay xanuunkaan tima guranka, dhawrkii toddobaad ee la soo dhaafaynne ugumaba jirin oo waxa laga dareemayay walwal xad dhaaf ah” ayay tiri Raj hooyadii.
“ Waxan soo toosay isagoo ka lulanaya saqafka sare ee qolkiisa aroornimadii maalintii fasaxiisa, waan argagaxay, durbaba waxaan u dhawaaqay dariska, waxaana igu soo cararay raggii jaarka ahaa oo Boliiskana inoogu yeeray” ayay sii raacsatay hooyada Raaj hadalkeeda.
Ugu danbeyn Taqaatiirta cusbitaalkii la geeyay ayaa hooyadaan u xaqiijiyay geerida wiilkeeda Raj, Waxa ayna noqotay dhacdadaas mid laga hadal hayo guud ahaan wadanka Hindiya ka hor inta aysan sidaan uga noqon dunida kala fajac la yaab huwan iyo Naxdin.
Previous: Morocco: Lamaane isku guursaday guri lagu xanaaneeyo waayeelada.
Next: Leicester City oo ku dhow in ay lasoo wareegto Fousseni Diabate oo u ciyaara Gazelec Ajaccio